China puppy ipads yokwenziwa kunye nefektri | KwiBondhot
Iipads ezifanelekileyo zoQeqesho lwePotty
Nika injana yakho elona thuba lihle lokuphumelela xa kuziwa kuqeqesho lwamanzi. Iipads zoqeqesho lwezilwanyana zasekhaya zibonelela ngokusebenza okuphezulu kunye noluncedo oluthembekileyo ukuze izinja ezithandekayo zifunde ngokukhawuleza.
Ukongeza kuqeqesho lwamantshontsho amancinci, iipads zikwasebenza kakuhle ukunceda izinja ezigulayo okanye ezigugayo, ukwenza izinja zikhululeke ngakumbi ngexesha lothutho, okanye zinike enye indlela ngaphandle kwezinja ngaphandle kokufikelela kwangexesha.
Ubungakanani obuninzi bufumaneka: Obona bukhulu baziwayo zii-22x22inches, 22x23inchs
Sinokwenza ubungakanani obuninzi ngokweemfuno zabaxhasi.
5Layer ukuvuza Ubungqina boYilo
Iphedi nganye iza neendlela ezintlanu zokuqinisekisa ubungqina bokuvuza. Uluhlu oluphezulu lwe-antibacterial lubonelela ngokukhawuleza ukomisa umphezulu ovaliweyo ekumanzeni, ukulawula ivumba, kunye nokuthintela ukulandela umkhondo. Uluhlu lokuqhubekeka lugcina ulwelo luhamba kwicala elifanelekileyo, ngelixa isiponji esifana nesiponji sibonelela ngokufunxa okuphezulu kwaye sijike ulwelo lube yijel xa sinxibelelana. Amacwecwe amabini okugqibela oqeqesho lokuvuzisa izilwanyana zasekhaya umaleko wokutshixa kunye neplastiki ekhuselekileyo- gcina imigangatho ikhuselekile ekonakaleni.
Umtsalane owakhelwe ngaphakathi weziphumo ezikhawulezayo
Ngokukodwa eyilelwe eyakhelwe kumtsalane, izinja zitsaleleka kwiphedi xa indalo ibiza, oko kuthetha ukuba uqeqesho olunamandla kunye noluphumeleleyo lwembiza kumntwana wakho. Khetha ngokulula apho ufuna ukuba inja yakho iye khona, yityhile iphedi, uyibeke phantsi ngecala leplastiki.
Indawo nganye yokuqeqesha izilwanyana inikezela ngoncedo olufanelekileyo lwenja yakho kunye noxolo lwengqondo kuwe. Nje ukuba isetyenzisiwe, uyilo lwe-pad lokufunxa kunye ne-liner-proof liner yicoce i-snap. Lula ngokulula iphedi, kwaye ubeke phantsi entsha.
Nceda uyiqhelanise injana yakho ngephedi ngokuyibeka edamini amaxesha amaninzi emini. Xa injana iye yahamba potty ngempumelelo, kwangoko vuza indumiso ngomlomo kunye nonyango olukhethekileyo, emva koko ubeke iphedi esetyenzisiweyo entsha. Ukuba injana yakho ishenxisa kwenye indawo, mbeke kamnandi kwiphedi njengenkuthazo, uhlala usebenzisa ukomeleza okuhle (okungalunganga). Ngezona ziphumo zibalaseleyo, beka injana yakho kwindawo encinci ukuqala, njengekhitshi okanye igumbi lokuhlambela.
Egqithileyo Iipads zokukhangela injana
Okulandelayo: Tyala inkunkuma yekati